downloads 16 405
Project OpenSky, 2d panel site Jimmy Richards
Boeing 767-300 dị elu nke ọtụtụ LOT, nke a add-on chọrọ nhazi nhazi nke ọma. Ihe ngosi 3D emere n'uju. FMC arụ ọrụ na 2D panel dị mgbagwoju anya maka ndị na-eme ihe nhịahụ. Ekwesịrị maka FS2004!
The Lotnicze Lọt Polskie Linie (English, ọtụtụ Polish Airlines) (Na obodo ntà: Ol ICAO code: Lọt) bụ mba ụgbọelu nke Poland. Guzosie Ike na 1 January 1929, ọ bụ otu n'ime ndị kasị ochie na ụwa, akpa ugbo elu jiri mee bu Junkers F13 (15 mbipụta) na Fokker F.Vlla / 1m (6 mbipụta).
Lọt sonyeere ụgbọelu mmekorita Star Alliance na 2003 na nwere a hotara na EuroLOT, nke na-enye anụ ụlọ flights na Poland.
The Boeing 767 bụ a ejima-engine airliner ụdị ogologo osisi, mepụtara site na American ụlọ ọrụ Boeing. O mere ka ya mbụ ụgbọ elu 26 September 1981. The nsụgharị dị iche iche nke 767 njem pụrụ ibu n'etiti 181 na 375 ndị na ndụ batrị dịgasị iche n'ebe 9400 ka 12 200 km, dabere na version na nhazi nke unit. The Boeing 767 dị atọ dị iche iche fuselages. The mbụ, ndị 767-200, banyere ọrụ na 1982, sotere 767-300 na 1986 na 767-400ER na 2000. Boeing nwekwara mepụtara nsụgharị "Extended iche" (Ea) maka -200 na -300 nsụgharị, ka ukwuu na obodo kwụụrụ na a elu payload. Na 1995, Boeing nyere ndị 767-300F, a ugboibu version kpamkpam. Ndị ọzọ ugboibu nsụgharị na-adị, ma ọ na-eji maka njem nsụgharị nke 767 na a tọghatara.
The 767 e mepụtara na tandem na-alụbeghị di-wara wara ugbo elu Boeing 757. Ma ugbo elu òkè otutu ihe, karịsịa ná imewe larịị na kokpiiti. The Boeing 767 bụ nke mbụ airliner banyere ọrụ a ụgbọ elu na ndi oru ugbo esịnede abụọ ụgbọelu naanị, nke tutu amama ojiji nke ọrụ nke a ụgbọ elu engineer.
Na 1990s, ndị Boeing 767 ghọrọ airliner eji maka kasị ogologo osisi ugbo elu na e akacha eji site ụgbọ elu maka transatlantic flights n'etiti United States na Europe. Na 2009, ngụkọta iwu maka Boeing 767, niile nsụgharị, bụ nanị ihe karịrị 1000, na 900 ugbo elu e nyefere. -300 / -300ER Nlereanya nke Boeing 767 bụ ndị kasị ewu ewu mbipute a ugbo elu, na fọrọ nke nta abụọ n'ụzọ atọ nke ngụkọta iwu. Na 2009, e nwere ndị 864 Boeing 767 ọrụ, na-ekesa n'etiti 48 ụgbọ elu.
September 11, 2001, n'ụbọchị ọgụ na New York, abụọ Boeing 767 na jiri n'ime ejima ụlọ nche nke World Trade Center. (Source Wikipedia)
Onye edemede: OpenSky Open, panel 2d site na Jimmy Richards
Boeing 737-200 American ụgbọ elu FS2004